Home » Archives by category » Qaramada
Posted on October 21, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub, Qaramada
Qori tuurka is reebka kala baxa koobka aduunka ee qaarada yurub ayaa mar dhowayd la sameeyay ayadoo ay isku aadeen Portugal iyo Sweden. Arinta xiisaha leh ayaa ah in Cristiano Ronaldo iyo Ibrahimovic ay ku loolami doonaa sidii xiddig kasta uu qarankiisa ugu soo saari lahaa koobka aduunka. Waxaa sidoo…
Rooney iyo Gerrard oo u soo saaray ingiriiska koobka aduunka
Posted on October 16, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub
Xulka Ingiriiska ayaa u soo gudbay koobka aduunka ka dib markii ay Wembley ku garaaceen Poland 2-0. Wayne ayaa madax ku dhamaystiray karoos uu keeay Leyton Baines daqiiqadii 42-aad, Hal mar ayaa waxaa is badalay jawigii Wembley ayadoo la maqlayay sawaxan iyo rayn-raynta taageerayaasha ingiriiska. Ciyaartu markay ka dhimanayd labo…
Ruushka iyo Bosnia Herzegovina ayaa u soo baxay koobka aduunka
Posted on October 15, 2013'); ?> by goolhaye and saved under Koobka Aduunka, Maxaa Cusub
Qaramada Ruushka iyo Bosnia Herzegovina ayaa koobka aduunka u soo baxay ka dib markii ugu dhibco bateen guruubyadooda ee dhowaan la soo gaba-gabeeyay. Ruushka ayaa ku biloowday asagoo bareejo kaliya u baahnaa kulankii ay Azerbajaan kula lahaayeen gagidooda. Roman Shirokov ayaa goolkii koowaad u dhaliyay Ruushka, Inkastoo uu jawiga cayaarta…
Colombia oo u soo gudubtay koobka aduunka ka dib markii looga hor maray 3-gool
Posted on October 12, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Maxaa Cusub, Qaramada
Colombia ayaa si cajaa’ib ah isaga soo guday sadex gool oo Chille uga naxsatay bilowgii ciyaarta halkaasna ugu gudbay koobka aduunka oo lagu qaban doono Brazil. Colombia ayaa 5-kulan ee is ree-reebka ay gurigeeda ku ciyaartay guulo ka gaartay laakiin uu kulankaan uga duwanaa maadaama ay u baahnaayeen Bar-baro si…
Xulka Belgium oo Koobka aduunka ee Brazil lagu qaban doono u soo baxay
Posted on October 12, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub, Qaramada
Xulka kubada cagta Belgium ayaa u soo gudbay Ciyaaraha aduunka ka dib markii ay qaranka Croatia ku garaaceen Zagreb kulan is reeb-reebka koobka aduunka ah. Ciyaarta ayaa waxay ku bilaabantay si dar-dar leh ayadoo ay isla markiiba goolkii u horeeyay ee ciyaarta uu Lukaku intuu goolhayaha Croatia u gooyay si…
Cape Varde iyo Senegal oo u gudbay is reeb-reebka koobka aduunka
Posted on September 8, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub
Jasiirada Cape Verde ayaa ku garaacday Tunisa gagideed 2-0 halkaasna ugu gudubtay is reeb-reebka koobka aduunka wareegiisa u dambeeya. Platini ayaa u dhaliyay goolka koowaad Cape Varde daqiiqadii 28-aad, Ayadoo wax yar ka dib uu goolkii labaad u xaqiijiyay Ramos Nhuck. Cape Verde ayaa difaacatay hogaankeeda qaybtii labaad ee ciyaarta…
Brazil oo Australia cashar wayn u dhigtay ciyaar saaxiibtinimo
Brazil ayaa 6-0 ku xasuuqday qaranka Australia kulan saaxiibtinimo oo ka dhacay gagida Estadio Mane Garrincha oo ku yaal Brazilia. Waxay ku qaadatay lix daqiiqo Selacao inay jabiyaan difaaca Aussie ayadoo uu Jo dhamaystiray kubada Bernard uu birta garaacay ka dib karoos cajaa’ib ah oo uu ka helay Neymar. Jo…
Nigeria, Ethopia iyo Burkino Faso ayaa u soo baxay is reeb-reebka u dambeeya ee koobka aduunka
Posted on September 7, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub
Nigeria,Burkino Faso iyo Ethopia ayaa u soo gudbay ciyaaraha is reeb-reebka koobka Aduunka ka dib markii ay u dhibco sareeyeen Guruubkooda. Nigeria ayaa uga badisay 2-0 Malawi, Goolashana waxaa u dhaliyay Emmanuel Emanike iyo Victor Moses. Dhanka kalana Ithopia ayaa qalbiga jabisay taageerayaasha South Africa ka dib markii ka badiyeen…
Messi iyo Balotelli ayaa dhaawac uga maqnaan doona qaramadooda kulanka berri
Posted on August 13, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Maxaa Cusub, Qaramada
Mario Balotelli iyo Lionel Messi ayaa dhaawac uga maqnaan doona kulanka saaxiibtinimo oo berri dhex mari doona Italy iyo Argentina. Baloteli ayaa soo gaaray dhaawac dhanka jilibka ah isniintii asagoo dib loogu celiyay Milan si uusan u seegin kulanka Milan koobka horyaalada oo dhacaya dhawaan. “Wuxuu qabaa barar dhanka jilibka…
- Powered by WordPress - Designed by goolhaye Realtime website statistics